नियम मिचेको भन्दै ‘चिट’ काट्ने ट्राफिकलाई माग्ने बूढाले दिए धन्यवाद ! – Khabarhouse
नियम मिचेको भन्दै ‘चिट’ काट्ने ट्राफिकलाई माग्ने बूढाले दिए धन्यवाद !
Khabar house | ८ माघ २०७६, बुधबार १७:११ | Comments
काठमाडौं : हास्यकलाकार केदार घिमिरे (माग्ने बूढा)ले नियम उल्लङ्घन गरी चिट का’ट्ने ट्राफिक प्रहरीलाई धन्यवाद दिएका छन् । उनले चेकिङका क्रममा मीठो व्यवहार गरेको भन्दै ट्राफिक प्रहरी सन्तोष चौधरीलाई भेटेर धन्यवाद दिएका हुन् । बुधवार उनी आफ्नो ग्वार्कोस्थित घरबाट एक साथीलाई भेट्न बानेश्वरतिर आउँदै थिए । सो क्रममा घर नजिकै भएको चेकिङका क्रममा उनी प्रहरीको कारवाहीमा परेका थिए ।
ट्राफिक प्रहरी सन्तोष चौधरीले मीठो स्वरमा ‘तपाईंले सिट बेल्ट लगाउनुभएको रहेनछ, चिट काटिदिऊँ?’ भनेका थिए । उनको व्यवहारबाट केदार आफू प्रभावित भएको र उत्तिखेरै चिट काट्न त्यसरी नै प्रतिक्रिया दिएका थिए । ‘उहाँले कति मीठो गरी भन्नुभयो यसरी पनि त हुँदो रहेछ नि,’ केदारले भने । ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा कार्यरत सन्तोषले पनि चेकिङका क्रममा आफूले केदार घिमिरेलाई नचिनेको बताए ।
उनले भने ‘त्यतिखेर मैले चिनिनँ, उहाँले सिट बेल्ट लगाउनुभएको थिएन, मलाई केही जस्तो लागेन,’ चौधरीले भने । केदारले त्यतिबेला आफूले उनीको टोपी र मास्क लगाएकाले ती ट्राफिक प्रहरीले नचिनेको हुनसक्ने बताए। त्यतिबेला आफू चिनिन नचाहेको पनि उनले बताए । ‘गल्ती गरिसकियो, मैले त चिट काटिदिन भनेँ,’ केदारले हाँस्दै सुनाए ।
यसअघि चौधरीले अभिनेता भुवन केसीलाई पनि चिट काटेको सुनाए । त्यतिबेला भने भुवन केसीले मादक पदार्थ सेवन गरेका कारण चिट का’ट्नु परेको पनि उनले खुलाए । ट्राफिक नियम उल्ल’ङ्घन गरे पछि केदारलाई रुपैयाँ ५ सयको चिट का’टिएको थियो ।
चिट काटेका ट्राफिक प्रहरी जवानले आफूसँग मिठो बोली, वचन गर्दै ‘तपाइँले सिट बेल्ट लाउनु भएको रहेनछ का’रबाही गर्छु है’ भनेको उनले बताए । त्यसपछि आफूले का’रबाही गर्न मञ्जुरी जनाएको बताए । महा शाखाका पुगेका माग्ने बुढाले ट्राफिक प्रमुख एसएसपी भिमप्रसाद ढकाललाई धन्यवाद दिँदै चिट काट्ने जवानलाई भेट्ने इच्छा जनाए । उनको इच्छा अनुसार चिट काट्ने ट्राफिक प्रहरी जवान सन्तोष चौधरीलाई माग्ने बुढाले भेटेर उनले राम्रो व्यवहार र वचन गरेको भन्दै आभार व्यक्त गरे ।